Abasolwa baphunyuke ekufeni – kodwa kuyisiqalo sezinkinga zabo | Scrolla Izindaba
Abasolwa baphunyuke ekufeni – kodwa kuyisiqalo sezinkinga zabo
Kungenzeka ukuthi babe nokuphunyuka okuyisimangaliso ekufeni, kodwa lokho kumane kwayisiqalo sezinkinga zabo. Kusamele bachaze kuphiko lwe-Anti-Gang ukuthi kungani bengamanga lapho ebekuvinjwe khona umgwaqo.
Ngokusho kwamaphoyisa, amadoda amane abehamba ngohlobo lwemoto i-VW Golf awazange ame lapho bekuvinjwe khona umgwaqo, ashayisa itekisi. I-Polo yagingqika kabili, kwathi abalimele nabebevalelekile bakhululwa ngemihlathi yokuphila.
UNkosikhona Ndyenge ozibonele ngawakhe utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi, ubesiza umgibeli wesifazane ukuba angene etekisini ngesikhathi kwenzeka le ngozi enkulu. Yilokhu akubone ngoMgqibelo ku-Old Uitenhage Road elokishini laseGovan Mbeki, e-Port Elizabeth:
● “Ngiqale ngabona iGalofu liza ngesivinini esikhulu ngabe sengibona imoto yamaphoyisa iqhamuka ngasohlangothini lwase-Kleinskool nenye ebiqhamuka e-Missionvale.”
● “Kube sekudutshulwa kabili kodwa iGalofu alizange lime. Amaphoyisa avimbe indlela yalo, okuyilapho-ke eshayisane khona netekisi”.
● “IGalofu ligingqike kabili kwaba nefu elikhulu lothuli. Bengicabanga ukuthi kuzoqhuma.”
Kubonakala sengathi umshayeli wenqabile ukuma ngesikhathi uphiko lwe-Anti-Gang luzama ukubamisa. Amaphoyisa abajaha kanye namaphoyisa kaMasipala ajoyina evela kolunye uhlangothi.
UNkosikhona uthe, amaphoyisa afike ngejubane ephethe izibhamu ezikhombe kubasolwa, obekumele badedelwe ngemihlathi yokuphila.
UKaputeni uSandra van Rensburg uthe, abagibeli balimale kakhulu kwathi umshayeli waboshwa. Munye kuphela kubagibeli abayi-14 ophuthunyiswe esibhedlela.
Khonamanjalo, ngesikhathi amaphoyisa esalindile kule ndawo, i-Toyota Avanza yesiliva enabesilisa abathathu nabesifazane abathathu izame ukudlula.
Amaphoyisa ayamisa imoto njengoba ibixhunyaniswe nokubanjwa inkunzi okwenzeke ekuseni kakhulu, kwase kuboshwa umshayeli.
Abagibeli besifazane ababonakale bedakiwe kuthiwa baphikelele ekutheni amaphoyisa awabayise ezihlahleni ukuze bazikhulule ngabo.
Iphoyisa litshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi bangabagibeli okungenzeka ukuthi bayabandakanyeka ekubambeni inkunzi e-Despatch. Babuye bathola isibhamu esifana nesinye, kodwa abebesemgwaqeni abakwazanga ukuxhunyaniswa nokuphanga.